बुधवार, जेठ १४, २०७७ १०:१५:०५ Wednesday, 27 May, 2020
शनिवार, श्रावण २५, २०७६ News Missile
नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढ्ने क्रम जारी छ। साताको ६ दिन कारोबार हुँदा ४ दिन भन्दा बढेर सुनकाे मूल्य उकालो लागेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म ६५ हजार माथि नउठेको सुनको मूल्य यो महिनामा भने प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गरेको देखिएको छ।
मूल्य वृद्धिले निरन्तर नयाँ उचाइ कायम गर्दा त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको व्यवसयीको भनाई छ। मूल्य बढेसँगै सुनको बजारमा कारोवार निकै कम मात्रामा हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
नयाँ सुनको गरगहना किन्ने भन्दा गरगहना फिर्ता लिने काम बढी भएको व्यवसायीको भनाई छ। व्यवसायीका कुरा पत्याउने हो भने अहिले बजारमा सुनको माग ७५ प्रतिशतले घटेको छ।
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धसँगै अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर कटौंती गरेपछि सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको हो।
चाँदीको मूल्यमा भने ठूलो फेरवदल देखिएको छैन। सुनको मूल्य बढ्नुको कारण, बजारमा पारेको प्रभाव र वृद्धि कहिलेसम्म लगायतका विषयमा नेपाल सुनचादीँ व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको अंश :
सूनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नुकाे कारण के देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो र मेजर कारण भनेको चीन र अमेरिका बिचको व्यपार युद्ध नै हो। अहिले हाम्रो तर्फको कारण भने नेपालको डलरको तुलनामा मुद्र घटेको छ अर्थात डिभ्यालुएसन भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कारण र देशभित्रको कारणले दुबै कारणले गर्दा ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि हुन पुग्यो आजभन्दा डेढ महिना पहिले ६५ हजार हाराहारी भएको चीज अहिले ७० हजार नजिक आइपुग्यो।
यसको नेपाली बजारमा प्रभाव के देख्नुहुन्छ ?
साउन महिनामा सुनको भाउ घट्छ साउनमा गहना किन्नु पर्छ भन्ने भनाइ थियो र साउनमा कारोबार पनि बढी हुन्थ्यो तर अहिले त्यो भनाइ मिल्दैन। अहिले डाइरेक्टली अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असर हामीकहाँ पर्छ इन्टरनेटको जमानाले गर्दा त्यसमाथि भारत सधैभरी हाम्रो ओपन बोडर रहेको छ।
इन्डियामा पानी पर्‍यो भने हामीले छाता ओड्नु पर्छ भन्ने चलन रहेको छ। जस्तै अहिले कास्मिरमा तनाव बढ्यो हामीकहाँ समस्या देखियो। हाम्रो कारण केही समस्या पनि देखिएको छ।
अहिले सुनको डिमान्ड कस्तो छ ?
अहिले सुनको डिमाण्ड अत्याधिक घट्न गएको छ। भाउ बढेको हुनाले तीज आउनको लागि १ महिना पनि बाँकी रहेको छैन। एक महिना अघिदेखि तिजको चहलपहल हुनु पर्ने तर अत्यधिक मात्र वृद्धि भएको हुनाले मान्छेको क्रयशक्तिले भ्याउन सकेन।
एकातर्फ बाढी पीडितको कारणले आधारभुत आवश्‍यकतालाई परिपूर्ति गर्न पर्ने भएको छ भने सुनतर्फ लगानी गर्न सक्ने अवस्था भएन त्यसले पनि घटेको हुनुपर्छ।
अहिले तीजको चाडवाड भएपनि सुनको काराेबारमा चहपहल नभएको कारणले गर्दा अहिले हामीलाई व्यापार २५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै कारोबार भएको छ।
यतातर्फ डिमाण्ड छैन उता पूरानो गरगहना बिक्रीमा आएको छ त्यसले गर्दा सबैसँग स्टप पनि भएको छ। केही दिनमा त धेरै फिर्ता आयो भने सिमित पूँजीमा के गरी काम गर्ने भन्ने गुनासो पूर्वदेखि पश्‍चिमसम्मका व्यवसायीको छ।
अझै कहिलेसम्म बढ्न सक्ने देखिन्छ ?
अझै बढ्न सक्ने संकेत देखा परेको छ। किनभने २०१९ को अन्त्यसम्म १४ सय डलर मात्रै हुन्छ। भन्ने २००० को शुरु शुरुमा आएको थियो तर जुन आउदा १४०० डलर क्रस भयो अहिले १७० प्रति आंस जति पुग्न थाल्यो।
२०१९ को इन्डसम्म १५ सय डलर पुग्छ भन्ने अनुमान आएको छ। जुन गतिले अहिले सुनको भाउ बढेको छ । इन्डसम्म त के अब २/४ दिनमा नै बढ्ने हो कि भन्ने शंका हामीलाई लागेको छ।
त्यसकारण अहिलेको मान्छेको हल्ला र अनुमान १५०० डलर भएको हुनाले यस्तै तरिका रहिरह्‍यो भने छिट्टै ७० हजार माथि पुग्ने देखिन्छ।